यि हुन वर्षकै आकर्षक १० पुरुष ! हेर्नुस रबि लामिछाने देखि पारस खड्का सम्म — Riddle Nepal
यि हुन वर्षकै आकर्षक १० पुरुष ! हेर्नुस रबि लामिछाने देखि पारस खड्का सम्म
सन् २००९ नोभेम्बरदेखि नै पारस खड्काले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनकै नेतृत्वमा नेपालले क्रिकेटमा सुखद् नतिजा ल्याइरहेको छ ।
मैदानभित्र ब्याटिङसँगै बलिङमा पनि उत्तिकै राम्रो प्रदर्शन गर्ने ६ फिट १ इन्च अग्ला पारसको आकर्षक ब्यक्तित्वले पनि धेरैलाई तानिरहेको हुन्छ । ३० वर्षीय अलराउन्डर पारस राइट ह्यान्ड ब्याट चलाउँछन् भने उनी राइट ह्यान्ड मिडियम फास्ट बलर हुन् । नेपालीहरूमाझ उनको लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
तीन वर्षमै स्टार खेलाडी सावित भएका हुन्— राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका युवा बलर सन्दीप लामिछाने । चितवनका १७ वर्षीय लामिछाने स्पीन बलिङमा तहल्का मच्चाइरहेका छन् ।
आर्थिक दृष्टिकोणले विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग ९आइपिएल०मा अनुबन्धित हुने पहिलो नेपाली खेलाडी सन्दीपलाई आइपिएल टिम दिल्ली डेयरडेभिल्सले ३२ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको हो । लामिछानेले सन् २०१६ मा सम्पन्न यु—१९ विश्वकपमा आयरल्याण्ड विरुद्ध हयाट्रिक गरेका थिए ।
बुद्ध लामा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रले पाएको नवप्रतिभा हुन्—बुद्ध लामा । गत असोजमा नेपालको लोकप्रिय रियालीटी शो नेपाल आइडलको उपाधि जितेपछि सेलिब्रेटी भएका पोखराका बुद्ध अहिले धेरैको रोजाइमा पर्ने गायक हुन् ।
२० वर्षीय लामा त्यसअघि पोखरामा सञ्चालित ‘विग आइकन’मा चौथो भएका थिए । प्लस टु अध्ययनरत बुद्ध संगीतका विद्यार्थी समेत हुन् । अहिले उनका प्रशंसकको संख्या ठूलैभैसकेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल टेलिभिजनमा ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम चलाउँथे रवि लामिछाने । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उनी उक्त कार्यक्रमबाट हटाइए ।
अहिले उनले न्युज—२४ मा कार्यक्रम ‘जनतासँग सिधा कुरा’ चलाइरहेका छन् । आफ्नो कार्यक्रममा पीडित पक्ष र सरोकारवालाहरूलाई एक ठाउँमा उपस्थित गराएर फरक धार र स्वाद दिन खोजेका कारण उनी लोकप्रिय हुँदैं गएका छन् । सन् २०१३ मा उनले लगातार ६० घण्टाभन्दा बढी टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर विश्व कीर्तिमान समेत बनाएका थिए । कान्तिपुर साप्ताहिकले छापेको छ ।